Qalliinka dumarka looga dhaliyo oo sannad kaste dila 300,000 - BBC News Somali
Qalliinka dumarka looga dhaliyo oo sannad kaste dila 300,000
Posted at 8:58 29 Mar8:58 29 Mar
Darawal ku tacadiyay ambalaas oo mushaarkii kala bar laga jaray
Darawal reer Uganda ah oo ambalaas ku qaaday bulukeeti ayaa shaqada laga fariisiyay ka dib markii lagu helay in uu si sharci darro ah u adeegsaday hanti dawladeed, sida uu ku warramay wargeyska dawladda lala xiriiriyo ee New Vision.
Wargeyska ayaa sheegay in darawal Goddy Otto shaqada laga fariisiyay isla markaasna la siin doona kala bar mushaarkii uu qaadanayay, sidoo kalana waxaa lagu amray in uusan dalka dibadiisa u safrin inta uu ganaaxa ku maqan yahay.
Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ayaa xaqiijiyay in arrintaasi ay dhacay 21 bishan Maarso.
Qof ka walaacsan sida loo isticmaalayo ambalaasta ayaa Twitterka soo dhigay sawirrada ambalaasta oo lagu rarayo bulukeeti.
Saxafi ayaa soo dhigay waraaq raaligalin ah oo darawal uu qoray.
Posted at 8:24 29 Mar8:24 29 Mar
Cilmibaaris wayn oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in sannad kasta ay 300,000 oo qof oo dunida ku kala nool ay u dhintaan qalliin looga dhalinayo, in yar marka laga reebana ay dumarkaas ku dhintaan dalalka soo koraya.
Cilmibaaristan oo ay horkacaysay jaamacadda Queen Mary University ee magaalada London ku taalla ayaa loo arkaa in ay tahay middii ugu baaxad waynayd ee abid la qaado marka ay timaaddo mawduucan.
Cilmibaareyaasha aya qiimeeyay macluumaadka 12 milyan oo dumar ah oo uur qaaday. Waxayna ogaadeen in dimashada ka dhalata qalliinka la isaga dhaliyo ay aad uga baaxad wayn tahay sidii ay filayeen.
Qalliinkan la isaga dhaliyo ayaa loo adeegsadaa si loo kala badbaadiyo hooyada iyo ilmaheeda.
Balse marka ay timaaddo dalalkaSaxaraha Afrika ka hooseeya aad ayaa loogu dhintaa.
Dumarka ku dhinta gobolkan ayaa 100 jeer ka badan kuwa ku dhinta dalalka horumaray sida Britain.
Boqolkiiba toban ka mid ah carruurta ku dhimata qalliinka ayaa geeriyooda wax yar uun ka dib marka qalliinku dhammaado.
Cilmibaaristan oo lagu daabacay jariidadda arrimaha caafimaadka ka faaloota ee The Lancet ayay soosaareyaashu ku baaqeen in dalalka ay ku nool yihiin dumarka uu aadka u saameeyay qalliinka in ay hagaajiyaan xirfadda shaqaalaha caafimaadka, si loo xaqiijiyo ammaanka qalliinka.
Posted at 6:44 29 Mar6:44 29 Mar
Boeing oo lagu dacweeyay diyaaraddii burburtay ee Itoobiya
Ehelka wali laguma wareejinin haraagii maydadkaImage caption: Ehelka wali laguma wareejinin haraagii maydadka
Dacwad ka dhan ah shirkadda diyaaradaha samaysa ee Boeing ayaa la geeyay maxkamad faderaal ah oo Maraykanka ku taalla, waxaana dacwadda soo gudbiyay qoys uu nin kaga dhintay diyaaraddii Itoobiya ee burburtay bishan horraanteedii.
Dhammaan 157 ruux ee saarnaa ayaa geeriyooday, waxayna kala ahaayeen rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda.
Ehelka Jackson Musoni oo ahaa muwaadin reer Rwanda ah oo diyaaradda ku dhintay ayaa diyaaradda Boeing 737 Max ku eedeeyay in ay cilad leedahay.
Dhammaan diyaaradaha noocoodu yahay Boeing 737 Max ayaa laga joojiyay in ay duulaan ka dib markii ay burbureen labo diyaaradood oo noocaas ah muddo shan bilood gudahood ah.
Boeing ayaan wali ka jawaabin tallaabadaas.
Boeing ayaa Arbacadii shaacisay in ay cilad bixisay qaybtii lala xiriiriyay burburka labada diyaaradood.
Baareyaasha ayaa wali ka baaraan dagaya waxa sababay qaraxa.
Posted at 6:05 29 Mar6:05 29 Mar
Nin mucaarad ah oo 15 sano laga mamnuucay xil cusub
Hoggaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaidó ayaa muddo 15 sano ah xayiraad laga saaray in uu xil dambe ka qabto dawladda, xayiraadaas ayaana ah midda ugu wakhti dheer ee sharcigu ogol yahay, madaxa arrimaha maaliyadaha ee dawladda ayaa arrintaas ku dhawaaqay.
Elvis Amoroso oo ah madax arrimaha maaliyadda ee Venezuela ayaa sheegay in aysan fadhiyin xisaabaadka bangiga u yaalla Guaidó.
Guaidó oo ah guddoomiyaha baarlamaanka uu mucaaradku aqlabiyadda ka yahay ayaa bishii Janaayo ku dhawaaqay in uu isagu madaxweyne ka yahay Venezuela.
Wuxuuna taageero ka haystaa in kabadan 50 dal oo uu ku jiro Maraykanka.
Wariyaha BBC Will Grant oo ku sugan caasimadda Venezuelan ee Caracas ayaa sheegaya in sharcigan xilka looga hor istaagayo Guaidó uu dhaqan gali doono haddii uu damco in uu isa soo sharaxo marka uu dhammaado xilka uu baarlamaanka ka hayo hadda.
Guaidó ayaa diiday ku dhawaaqitaanka Amoroso wuxuuna sheegy in uusan ahayn hanti dhawrka guud ee dalka.
Posted at 6:04 29 Mar6:04 29 Mar
Jimce wanaagsan Akhyaarta halkan naga daalacataay, kuna soo dhawaada tabinta tooska ah een ku samaynayno wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka.
Waa maalin Jimce ah oo ay taariikhdu tahay 29 bisha Maarso sannadka 2019.
Posted at 10:55 28 Mar10:55 28 Mar
11 ruux oo ku dhimatay qarax wayn oo Muqdisho ka dhacay
Qarax ka dhacay waddada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho ayay ku dhinteen 11 ruux kuna dhaawacmeen 16 kale, sida ay BBC-da u sheegeen gawaarida gurmadka degdegga ah ee Aamin Ambalaas.
Qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay ayaa la dhigay inta u dhaxaysa Isgoysyada dabka iyo Sayidka.
Dad goob joog ah ayaa BBC-da u sheegay in ay indhahooda ku arkeen maydad iyo dhaawacyo.
Ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah lagama hayo khasaaraha dhabta, waxaana laga cabsi qabaa in ay intan ka sii badato.
Dukaamada, makhaayadaha iyo ganacsiyada ayaa furnaa dad ayaana waddada marayay marka uu qaraxu dhacay.
Ururka Al shabaab ayaa sare u qaaday qaraxyada ay ka gaystaan Muqdisho inkastoo ay xiran yihiin in badan oo ka mid ah waddooyinka magaalada.
Posted at 9:43 28 Mar9:43 28 Mar
War deg deg ahMarkabkii ay tahriibeyaashu afduubteen oo la qabtay
Ciidammo hubaysan oo reer Malta ah ayaa la wareegay gacan ku haynta markab ay afduubteen tahriibeyaal, waxayna keeneen dakad ku taalla jasiiraddaas.
Milatariga ayaa sheegay in hawlgalka lagu soo qabtay ay fuliyeen ciidammo si gaar ah u tababaran kuwaas oo u daatay markabka lagu magacaabo Elhiblu 1.
Booliiska ayaa hadda baaritaan samaynaya, Ra’iisulwasaaraha dalka Malta Joseph Muscat ayaana sheegay in la raaci doono dhammaan shuruucda caalamiga ah.
Markabkan ayaa badbaadiyay dad kor u dhaafaya 100 ruux oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween kuwaas oo ku sugnaa xeebaha liibiya habeenkii Talaadada.
Tahriibayaasha ayaa ka cabsaday in dib loogu celiyo Liibiya, qaarkood ayaana maamulka ka wareejiyay kabtankii markabka waday.
James Reynolds oo BBC-da uga soo warrama Koonfurta Yurub ayaa ku soo warramaya in aysan caddayn waxa ay hadda mudan doonaan tahriibeyaasha, balse ay gaareen meeshii uu hadaf koodu ahaa.
lifaaqan hoose ka akhriso warbixintii aan horay uga qornay markabka.
Tahriibeyaal af duubtay markabkii badbaadiyay
Posted at 9:25 28 Mar9:25 28 Mar
Manchester United oo tababare rasmi ah yeelatay
Kooxda Manchester United ayaa tababare rasmi ah ka dhigatay Ole Gunnar Solskjaer, waxayna siisay qandaraas saddex sano ah.
Ninkan reer Norway oo 45 jir ah ayaa Old Trafford ku soo biiray bishii Diseembar ee sannadkii hore isaga oo si ku meel gaar ah u badalay Jose Mourinho.
Solskjaer ayaa 11 sano horray ugu soo dheelay United isaga oo u saxiixay gooshii ay Manchester United ku hanatay koobkii Champions League ee sannadkii 1999.
“Waa shaqo aan waligay ku riyoon jiray, si xad dhaaf ah ayaana u maqsuudsanahay maadaama aan helay fursad dheer oon kooxda ku sii hoggaamiyo” ayuu yiri Solskjaer.
“Maalintii u horraysay een imid, waxaan dareemay in uu gurigaygii yahay. Sharaf ayay ii ahayd in aan u soo ciyaaray Manchester United, isla markaasna aan tababarenimo ka billaabo halkan.
Posted at 8:48 28 Mar8:48 28 Mar
Madaxweyneyaasha Kenya iyo Uganda oo safar taariikhi ah wada galaya
MICHAEL KHATELICopyright: MICHAEL KHATELI
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa noqon doona hoggaamiyihii u horreeyay ee ajnabi ah ee ku safra tareenka isku xidha magaalo xeebeedka Mombasa iyo caasimadda Nairobi kaas oo kharashka lagu dhisay laga helay dalka Shiinaha.
Waxaa safarkaas ku wehelin doona madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, iyadoo labada masuul ay diiradda saarayaan sidii lagu xoojin lahaa xiriirka labada dal.
Museveni ayaa sheegay in khadka tareenka ee lagu dhisay 3.2 bilyan oo doolar in uu wax ka qabtay dhibaatadii soo noqnoqon jirtay ee shixnadaha uga yimaadda magaalada Mombasa maadaama uusan dalkiisu bad lahayn, uuna rajaynayo in la gaarsiin doono Kampala oo ah caasimadda dalka Uganda.
“Anaga oo dib boorka uga jafayna dhaqaalaha dalalka u kala goosha, waxaan ka rabnaa in aan aragno khadka tareenka oo la sii ballaariyay.
“Waxaan ogahay in marka la dhamaystiro khadkaas Kampala lagu tagi doono 24 saac” ayuu yiri Yoweri Museven, sida uu wargayska The East African ka soo xigtay.
Kenyatta ayaa xariga ka jaray khadka tareenka bishii May ee sannadkii hore, isaga oo arrintaas bogaadinaya ayuuna ku tilmaamay taariikh cusub oo uu hoosta ka xariiqay dalkan Bariga Afrika ku yaalla.
Mashruuca tareenkan ayaa ahaa midkii ugu waynaa kaabeyaasha dhaqaalaha ee Kenya laga hirgaliyo tan iyo markii uu dalkaasi xoriyadda ka qaatay Britain sannadkii 1963dii.
Si kastaba ha ahaatee waxaa ka dhashay muran badan. Labo masuul oo sare oo dawladda Kenya ka tirsan ayayna maxkamaddi ku soo oogtay dacwaddo la xiriira musuqmaasuq bishii Agoosto ee sannadkii hore iyaga oo loo haysto wax isdabo marin ku saabsan dhaqaalihii lagu dhisay tareenka.
Labadaas masuul ayaa lagu eedeeyay in ay labo milyan oo doolar u shubeen shirkad si been ah u sheegatay in dhul ay leedahay uu maray khadka tareenka.
Masuuliyiintaas iyo 15 ruux oo kale ayaa diiday eedaymaha loo soo jeediyay.
Posted at 5:20 28 Mar5:20 28 Mar
Xildhibaan Soomaali ah oo dad ku laayay deegaankii laga soo doortay
Xildhibaan Soomaali ah ayaa labo ruux ku dilay degmadda Jarati ee Dawlad Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya, sida uu BBC-da u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Shaafi Diiriye Shaafi.
Labada marxuum iyo xildhibaanka ayaa la sheegay in ay isku haysteen dhul beereed.
Dacwad isqabqabsigan la xiriirta ayaa taalla maxkamadda degmadda Jarati, sida uu gudmoomiyuhu sheegay.
Xildhibaan Bashiir Diiriye Camey iyo labo qof oo la socotay oo midkood uu darawal ka ahaa bajaajtii waday ayaa xabsi la dhigay waxaana socda baaritaan.
“Xukuumaddii hore ayaa xildhibaannada siisay dhul beereed iyo lacago, dhulkaas qayb ka mid ahna xukuumaddu waxay ka bixisay gacanta dad shacab ah,” ayuu yiri gudoomiye Shaafi.
Markii ay dhacday xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar ayay dadkii soo rogaal celiyeen oo sheegteen dhulkoodii ayuu intaas ku sii daray.
Dhibaatada dhulka ayaa ka taagan meelo badan oo ka mid ah Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya balse waxaa naadir ah in xilbaan uu dad u laayo dhul ay isku qabsadeen.
Xildhibaankan ayaa la sheegay in uu haystay biskoolad iyo qori u sharciyaysnaa.
Posted at 5:18 28 Mar5:18 28 Mar
Waa maalin Talaado ah oo ay taariikhdu tahay 28 bisha Maarso ee sannadka 2019.
Posted at 11:10 27 Mar11:10 27 Mar
"Dagaallada soo noqnoqonaya ee Mali waa in ay si degdeg ah u istaagaan"
Afar ruux ayaa lagu dilay tuulada Dogon oo ku taalla bartamaha dalka Mali arrintan ayaana timid ka dib markii weerar kale oo qabiilka Fulani uu ku qaaday tuulo kale lagu dilay 154 ruux Sabtidii, sida uu shaaciyay hawlgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee Mali oo magiisa loo soo gaabiyo Minusma.
“Weerarkan soo noqnoqanaya waa in sida ugu dhakhso badan loo istaajiyaa,” ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay taliyaha ciidammada nadab ilaalinta ee Minusma Mahamat Saleh Annadif.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in weerarka tuulada Dogon uu ka dhacay habeennimadii Sabtidii saacado uun ka dib markii uu xasuuqu ka dhacay Ogossagou.
Dadka dhintay waxaa ka mid ah gabadh sida uu shaaciyay hawlgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee Minusma.
Madaxweynaha Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa Isniintii milatariga ugu baaqay in ay dadaalkooda kor u qaadaan si shacabka loo badbaadiyo.
Talaadadiina madaxa Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in 600 ay ku dhinteen dagaallo bulshada dhex marayay tan iyo bishii Maarso ee sannadkii hore.
Posted at 9:26 27 Mar9:26 27 Mar
Duufaanta Idai waxay baabi’isay dalag sannado la quudan karay
Hay’adda Cuntada Adduun ee Qaramada Midoobey ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegtay in duufaantii ku dhufatay Afrikada Koonfureed 12 maalmood ka hor ay ku baaba’een dalag sannado la cuni karay oo ka baxayay dhul wayn oo ku kala yaalla Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe.
David Beasley oo madax ka ah Hay’adda Cuntada Adduunka ayaa BBC-da u sheegay in beeralaydu ay waayeen wax walba ayna u baahan yihiin gargaar degdeg ah si looga hor tago masiibo banii’aadannimo oo muddo dheer taagnaata.
Dufaanta Idai ayaa burburisay tobannaan kun oo guryo ah oo ku yaalla Mozambique halkaas oo in ka badan 1.8 milyan oo ruux ay gargaar u baahan yihiin.
Iyadoo laga cabsi qabo in ay dillaacaan cudurrada biyaha ka dhashana Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in ay dirayso 900,000 oo tallaalka daacuunka ah, taas oo la filayo in ay gaarto 10 maalmood ee foodda inagu soo haya.
Posted at 8:35 27 Mar8:35 27 Mar
Nigeria oo dhalisay gooshii ugu dhakhso badnayd
Xulka qaranka Nigeria ayaa ka badiyay Masar oo ay la yeesheen ciyaar saaxiibtinimo oo Talaadadii dhacday, ciyaarta ayaana lagu kala badiyay gool tobankii ilbiriqsi ee u horreeyay dhashay.
Ciyaartaas ayaa ka dhacday magaalada Asaba ee dalka Nigeria.
Paul Onuachu oo fadhigiisu yahay Denmark ayaa meel fog goosha ka soo toogtay sidaasna guusha ugu horseeday dalkiisa.
Dhanka kalana Senegal ayaa u baahatay in ay badal ku soo galiso Sadio Mane oo dalkiisa ka caawiyay in uu ka badiyo Mali.
Talaadadii waxaa sidoo dhacay ciyaaro ay natiijadoodu sidan kala ahayd:
Algeria ayaa ka badisay Tunisia, Ivory Coast waxay ka raysay Liberia, Ghana-na waxay gurigeeda kaga badisay Mauritania, Marocco ayaa iyaduna guul darro kala kulantay Argentina.
Posted at 6:03 27 Mar6:03 27 Mar
Saddex meeloodow meel dadka Afrika waxay ka baaraan dagayaan in ay haajiraan
Cilmibaaris cusub oo laga sameeyay 34 dal oo Afrikaa ah ayaa tilmaamaysa in in kabadan saddex meeloodow meel dadka Afrika ku nool ay ka baaraan dagayaan in ay isaga tagaan dalkooda, dadkaas intooda badan waxaa fikirkaas ku dhalinaya gaajada, in ay shaqo heleen iyo in ay ka firxadaan saboolnimada.
Cilmibaaristan uu sameeyay ururka Afrobarometer ayaa lagu ogaaday in da’yarta iyo dadka si fiican wax u bartay ay yihiin kuwa u badan ee laga yaabo in ay isaga tagaan dalkooda.
Balse meelaha ugu badan ee ay ku hamiyayaan in ay aadan ma aha Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ee waa dal kale oo Afrikaan ah.
Dadka cilmi baaristan soo saaray ayaa sheegay in haddii dalalka Afrikaanka ah aysan sare u qaadin shaqo abuurka ay waayi doonaan dadkooda sida fiican wax u bartay, kuwooda niyadda haya iyo dhallinyaradooda hal abuurka leh.
Posted at 6:01 27 Mar6:01 27 Mar
Gabdhihii ku feegaaray sawirka madaxweynaha Burundi oo la sii daayay
Dawladda Burundi ayaa siidaysay saddex gabdhood oo ciyaal iskuul ah oo lagu eedeeyay in ay ku feegaareen sawirka madaxweyne Pierre Nkurunziza.
Gabdhaha ayaa la xiray ku dhawaad labo toddobaad ka hor iyaga oo loo haysto in ay wax u dhimeen madaxweynaha dalka, arrintaas ayaana horseeday in ay dad badan baraha bulshada uga hadlaan arrintan iyaga oo astaan ka dhigtay #FreeOurGirls ama gabdhahanaga sii daaya.
Dadkaas ayaana Twitterka soo dhigay sawirrada madaxweynaha oo geeso loo yeelay ama lagu feegaaray.
Wasiir ayaa sheegay in gabdhahaas ay da’doodu kala tahay 15, 16 iyo 17 isla markaasna si ku meel gaar ah loo sii daayay.
“Waxaan waalidka ugu baaqaynaa in ay xoojiyaan waxbaridda carruurtooda. Waxaan carruurta xasuusinaynaa in ay masuuliyiinta ixtiraamaan, da’da dambiga la isu qabsan karana ay tahay 15." ayay tiri wasiirad la hadashay warbaahinta RTNB.
Waa maalin Arboco ah oo ay taariikhdu tahay 27 bisha Maarso ee sannadka 2018.
Posted at 11:18 26 Mar11:18 26 Mar
Qarax ayaa ka dhacay isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho.
Waxaa loo malaynayaa in uu yahay qarax loo adeegsaday gaari, walina lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxaas.
Dad goob joogeyaal ah ayaa BBC-da u sheegay in uu gaari ku gubanayo goobta qaraxu ka dhacay.
Posted at 10:45 26 Mar10:45 26 Mar
Dufaanta Idai oo saamaysay dad hal milyan kor u dhaafaya
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha banii’aadannimada ee Ocha ayaa sheegtay in 1.8 milyan oo ruux oo ku nool dalka Mozambique ay saamaysay duufaantii Idai, qaarkoodna ay xaaladdoodu aad u liidato oo geeri ay qarka u saaran yihiin.
Hay’addaha gargaarka ayaa ka digaya in kumannaan ruux oo ka badbaaday duufaanta aysan wali helin wax gargaar ah, iyadoo markii ay duufaantu ku dhufatay Afrikada Koonfureed laga joogo 12 maalmood.
Wasiirka dhulka iyo deegaanka ee dalka Mozambique Celso Correia ayaa sheegay in dadaal la sameeyay si cunto, biyo, hoy iyo dawo loo gaarsiiyo dadka ku sugan dhulka joogiisu sarreeyo.
Wuxuu intaas ku daray in hawlaha samato bixinta la sii gaarsiinayo dhulka ay biyuhu ka sii yaraanayaan, balse wuxuu ka digay in ay sanado qaadan doonto soo kabashada deegaannadaas.
Posted at 9:53 26 Mar9:53 26 Mar
Airbus oo qandaraas balaayiin doolar ah ka heshay Shiinaha
Shirkadda diyaaradaha samaysa ee Airbus ayaa Shiinaha ka heshay qandaraas 300 oo diyaaradood ah, kaas oo lagu qiyaasay in uu ku kici doono adduun lacageed oo dhan balaayiin doolarka Maraykanka ah.
Qandaraaska noocyada diyaaradaha ee kala ah A320 iyo A350 XWB ayaa la kala sixiixday intii uu madaxweynaha Shiinaha booqashada ku joogay magaalada Paris ee caasimadda u ah dalka Faransiiska.
Qandaraaskan ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kuwo kale oo la sixiixay intii uu madaxweynaha Shiinuhu booqashada ku marayay Yurub.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo shirkadda ay loolamaan ee Boeing ay shaqada ka fariisisay dhammaan diyaaradaha 737 Max ka dib markii labo diyaaradood oo noocaas ah ay qarxeen.
Airbus oo soo saartay war qoraal ah ayaa sheegtay in heshiiska ay la gashay shirkadda China Aviation Supplies Holding Company ay ku jiraan iibsashada Shiinaha ee diyaaraddaha Airbus ee noocyadoodu ay ka mid yihiin diyaaradaha 290 A320 iyo toban uu noocoodu yahay A350 XWB.
Heshiiskan ayaa lagu qiyaasay in uu ku kici dono 34 bilyan oo doolarka Maraykanka ah, sida ay wararku sheegayaan.